Qoraalkan waxaan uga dan leeyahay inaan baaq u diro Barbaarta . – Xeernews24
Qoraalkan waxaan uga dan leeyahay inaan baaq u diro Barbaarta .
14. April 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Haddaan dib u milicsanno shalay Gobol dulmanaa baynu hayn. Gobol Dhulkiisa Canfar iyo Oromo Moofo looga dhigay baynu hayn .Maamul xumi baahsan iyo takrifal awooddeed lanoo isticmaali jiray.Keenna hadlo waa la baacsan jiray ama wadanka laga qixin jiray.Dhulkeenna oo Qowmiyada kale lagu wareejinaayo ayeynu markhaatiyaal waxba ka qaban kareyn ahayn.Kala qeybsanaanta bulshada iyo kala fogaanta ayaa aad ugu baahaysay dacallada Gobolka .Xoriyatul qawlka mid laga Soomay ayey ahayd kala shikinta dhexdeena qiyaas ma lahyn .Xabsiyada Canfarta aya dadkeenna Hooy looga dhigay.Sannadihii tagay Dadka ku dhaqan Sitti Abaar iyo Horumar la’aan bay ka dhaxleen.Dhiigeennu qaar bu xalaal u ahaa na baayici jiray Qandaraasyo innagu qaadan jiray.Kafannada Caddaalad aya Oodda loo rogay,Aqoonyahan ,wax garad,oday shakhsiyaad dhex fadhi ah oo Awood lahyn bay ahayeen.
Dhibaatada Baaxaddeed markey shacabku qaadi kari waayeen ayeynu isu tashannay kana tashannay sidii la’iskaga dul qaadi laha Mujirimiintii Cuwaafta innaga dhigatay ee hadda noqday dadka kuwa ugu Liita ee arlada Dusheeda ku nool .
Barbaarta Waa magacii ugu mug weynaa ee kacaankii Qeybta libaax ka qaatay .
Barbaar Goormay Awoodda buuxda yeelatay ?
Barbaar Dhalin is abaabushay dulmiga diiday ayey ahayeen.
Dhalin waxey ku kala qeybsanayeen cidhif iska dhigay ayey ahayeen.Isu damqasho leh jaceyl dhexdooda leh ,is fahan,s dhex gal aad u ballaadhan leh.Waxey diideen dadkii kala qeybin jiray kala qoqobi jiray Reer u kala qadqaadi jiray weyna ku gacan saydheen daalimiintii damacsanaa inay Iftiinka Barbaarta damiyaan.
Gabgabadiina Dhammaantood wey Guuleysteen waxeyna ka Guuleysteen kuwii shalay midnimadooda necbaa.
Barbaar Goorma ayey yara bukootay ?
Barbaar waxey u muuqata mid hadda cidhifka dhulka saaratay oo bukta.Waxey u hoggaansameen ayna yeeleenna kuwii shalay kala qoqobka iyo kala fogeynta dhex wadi jiray.Maamul waa Maamul ma jecla dhalin mideysan ,si masuuliyaddi loo igmaday loola xisaabtamin wa inay bulshada dhexdooda isu jeediyaan.Maamulkan hadda jira oo ah mid eexda,nin jecleysiga,kala qeybinta loogu mataaneeyay.Markaste waxey ka cabsi qabaan midnimada bulshada ayago Danahooga Gaar-ahaaneed ka horreysiin Danta-Guud.
Waxey iska dhaadhiciyeen Hebel iyo Hebel baa tahay laguma jecla waa lagu fogeeyay Caddaalad majirto,sinnaan ha sheegin.
Dhaqanki shalay edegga ku riday bulshadeenna ee dhulkeenna oo la bixin awoodda u weynay ayeynu hadda xambaarsannahay oo ku dhaqmeyna.
Xaaladda hadda aynu ku Jirno !!
Dhammaanteen waan ujeednaa in dhulkeennu wali innaga maqan yahay Shacab Nus milyan ah aya silic ku nool iyo rafaad cid u maqan maamul wala shakhsiyaad kale toona majiro .Dirdhabe waxa ka dhacay waan aragna ka aamusnaanta maamulka(Federal,Deegaankaba) mid la’iska idho tiri ayey u muuqata.Xabsiyada canfarta oo shacab waxba galabsan lagu Guri. Dadkeenno maalinkaste la xasuuqi cid ka hadashay aysan jirin.
Markaad sidaa u rog-rogto Dhibaata mid lamid ah tii shalay aan diidaneyn ayeynu hadda dhex dabbaalaneynaa .
Haa Moodin Haddii Shaqo lagaga eexdo inay ka tahay daacad iyo Reernimo.
Haa Moodin eexdan iyo Nin jecleysigan inay daacad ka tahay.
Haa Moodin kala sarreysiintan inay ka tahay Jifannimo .
Haa Moodin documentiyadaada ee Guddaafad lagu daro inay ka tahay Naceyb uu ku qabo.
Haa Moodin xumaanta ay faafinayaan iney tahay jifannimo iyo kala sarreysiin .
Waxooga aan soo sheegay iyo qaar kale oo badan oon la mahadi doonin Waa hubka ay addeegsadaan maamulku markay damacsanyihiin inay bulsho dhan burburiyaan tin ila cidhib.Ayago dhexdooda kubadda u dhigi si ay isu hirdiyaan ayagana looga mashquulo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Kacdoonka-Barbaarta-Sitti.jpg 336 546 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-14 09:18:342019-04-14 09:18:34Qoraalkan waxaan uga dan leeyahay inaan baaq u diro Barbaarta .
Shan siyaasi oo saameyn ku leh Soomaalia kuwaas oo wax kusoo bartay Suudaan... Heshiish cusub oo dhex dhexmaray Immaraadka iyo Puntland & Shirkada DP...